Yemen: An’arivony ireo mihetsika amin’ny Androm-pahatezerana · Global Voices teny Malagasy
Yemen: An'arivony ireo mihetsika amin'ny Androm-pahatezerana
Voadika ny 02 Marsa 2011 17:58 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana mikasika ny Hetsi-panoherana Yemen 2011.
An'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana nilahatra tao Yemen androany, tao anatin'ilay Androm-Pahatezerana hanamelohana ireo fanafihana ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny Zoma tao Aden, ary hitakiana ny fampitsaharana ny fitondran'ny Ali Abdullah Saleh. Araka ny ambaran'ny Amnesty International, Yemenita efatra no latsak'aina tamin'ireo fifandonana ireo, ary 26 no naratra.
Tsy nasian'ny mpanohitra lanjany ny antso fifanatonana nataon'i Saleh sy ny amin'ny hanatsaharana ny hetsika izay efa naharitra herinandro vitsy, ny mpanohitra izay tsy mitady afa-tsy ny fialàny sy ireo mpiara-mitantana aminy tsy ho eo amin'ny fitondrana.
Tao Sana'a renivohitra, samy nanao fihetsiketsehana na ny mpanohitra na ny vondrona mpomba an'i Saleh, raha i Saleh kosa, izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1978, dia niampanga an'i Israely sy Etazonia ho ao ambadiky ny onjam-panoherana misy amin'izao fotoana izao manerana ny tontolo Arabo.
Tao amin'ny Twitter, izao tontolo izao dia manohy manara-maso sy mitondra fanehoan-kevitra amin'ny fivoaran-draharaha ao Yemen. Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny Yemenita sy ireo bitsika sasany manaraka akaiky ny zava-misy eny an-kianja eny:
@Dima_Khatib: Milaza ny governemanta ao #Yemen fa hanangana governemantan'ny firaisam-pirenena ato anatin'ny 24 ora. Ny mpanohitra milaza hoe: tsia fa misaotra. Ny fitondrana no tianay haongana!
@Dima_Khatib: Nolavin'ireo antoko mpanohitra ao #Yemen ny tolotra fifanatonana avy amin'ny governemanta (ela ny ela) ary ankehitriny maniry revolisiona iray iarahana amin'ny vahoaka!!!
@steveturtle:Ny #Yemen an'i Saleh dia miampanga an'i Israely sy Etazonia ho miketrika ireo fitroarana. Mazava loatra fa tsy nihaino an'i Gaddafi izy. Izy mahafantatra fa ny Al-Qaeda sy ny zava-mahadomelina no anton'izao rehetra izao.
@Sareh1357: Mahatsikaiky! “AJA: Ny Filoha Yemenita #Saleh: Izay mitranga eto amin'ny tontolo Arabo amin'izao fotoana dia i Tel Aviv & White House no mamolavola azy.”
@lars_akerhaug: Ok, Atoa. Saleh, ajanony ny pilina mena. Ampy ny lehilahy adala iray.
tsolami manamarika hoe (Ar):
“Zavatra mitovy no lazain'ny filoha Yemenita: Yemen tsy Tonizia na Ejipta .. sekoly iray daholo ihany no nianaranareo mpanao jadona rehetra ireo.”
Ary i gadelkareem (Ar) manampy hie:
“Ejipta tsy i Tonizia .. ary Libia tsy i Tonizia na Ejipta .. ary Yemen tsy Tonizia na Ejipta na Libia.. ary Bahrain tsy i Tonizia na Ejipta na Libia na Yemen.”
Mandritra izany, hetsi-panoherana goavana no mitohy manerana an'i Yemen.
Al7anote mandefa bitsika (Ar):
“Androm-pahatezerana androany eto Yemen, ho fanoherana ny famoretana ireo hetsi-panoherana tany Aden.”
Rasdyemen manampy hoe (Ar):
“An'hetsiny maro no nanatevin-daharana ny Androm-pahatezerana, izay nokarakarain'ireo antoko mpanohitra, ho hetsika ho an'ireo niharam-boina tamin'ireo hetsika tany Aden, ary hangatahana ny fiatoan'ny fitondràn'i Saleh.”
@al3ini: Sary tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny androm-pahatezerana tao amin'ny kianjan'ny fanovàna tao #Sanaa #Yemen #Aden #Taiz http://yfrog.com/h0mqwoxj http://yfrog.com/h8xisanj
South_Arabia manamarika (Ar):
“An'aliny ireo nilahatra tao amin'ny Kianjan'ny Fanovàna tao Sanaa Renivohitra mikiaka ny fialàn'ny fitondran'i Saleh.”
@lalkilani: Ireo mpanao fihetsiketsehana dia niainga tao Tahrir nankany Saylah… ho aiza ry zareo? #Yemen #Sanaa
@alnitak250: Misy angidimby misidina ambany dia ambany eo ambonin'i Sana'a raha mameno ny arabe kosa ireo mpanao fihetsiketsehana #Yemen #YF
South_Arabia mandefa bitsika (Ar):
“Manodidina ny 100.000 ireo mpanao fihetsiketsehana ao Eb, mikiaka ny fialàn'ny fitondrana.”
@AkramAlodini: mpanao fihetsiketsehan'ny governemanta @ Hayel Saeed Street #yemen http://twitpic.com/44xz75
@AkramAlodini: mpanao fihesiketsehana manohitra ny governemanta @ kianjan'ny fanovàna #yemen http://twitpic.com/44xycu
South_Arabia miteny [ar]
An'aliny ireo andian'olona ao amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana, ao Taiz #yemen #aden #fb
@AlaaIsam: MAIKA: ny Talen'ny Fiarovana ao amin'ny distrikan'i Radfan (anarana: Haidrah) dia maty novonoin'ny tafika izao #Lahj #South #Security #Yemen
@bithack3r: #Yemen: ” Nataon'i Libia ampihimamba ny fifantohan-tsaintsika.. Saingy ao Yemen dia manandrana koa ry zareo hanilika ny fitondràna.” #ArabicEgo
@BobLaBricole: LIBIA……………..█████████░░░░ : mivoatra hatrany….. YEMEN……………█████████░░░░ : mivoatra hatrany…..